कहिल्यै पनि फेसबूकमा यस्ता गल्ती नगर्नुहोस् ! – Gorkhali Voice
कहिल्यै पनि फेसबूकमा यस्ता गल्ती नगर्नुहोस् !
२०७८, २२ असार मंगलवार १०:४६
काठमाडौं । हिजोआज सामाजिक सञ्जालबाट विमुख भएर बस्नै सकिँदैन । अनि फेसबूक धेरैले चलाइरहेका हुन्छन् र दिनभरि के के पोस्ट गरिरहन्छन् ।
फेसबूकमा केही पोस्ट गरेर फ्रेन्ड लिस्टमा भएका मानिसको ध्यान खिच्ने ध्येय सबैको हुन्छ । अनि लाइक र कमेन्टको अपेक्षा पनि हुन्छ । लाइक र कमेन्ट गन्दा राम्रो लाग्न सक्छ तर वास्तविकता भिन्नै हुन सक्छ । ​